Pro 11 | Shona | STEP | Chiyero chinonyengedzera chi nonyangadza kuna Jehovha; Asi kurema kwakakwana kunomufadza.
1Chiyero chinonyengedzera chi nonyangadza kuna Jehovha; Asi kurema kwakakwana kunomufadza. 2Kana kuzvikudza kuchisvika, kunyadziswa kwasvikawo; Asi uchenjeri huri kuna vanozvininipisa. 3Kusanyengedzera kwavakarurama kuchavatungamirira; Asi kusarurama kwavanonyengedzera kuchavaparadza. 4fuma haibatsiri chinhu nezuva rokutsamwa; Asi kururama kunorwira parufu. 5Kururama kwowakakwana kucharuramisa nzira yake; Asi wakaipa uchawiswa nezvakaipa zvake. 6Kururama kwavakarurama kuchavarwira; Asi vanonyengedzera vachabatwa nezvakashata zvavo. 7Kana munhu wakaipa achifa, zvaanotarira zvichaparadzwa; Tariro yavakashata inoparadzwa. 8Wakarurama anorwirwa pakutambudzika; Wakaipa anopinda pachigaro chake. 9Wakashata anoparadza wokwake nomuromo wake;
Asi wakarurama acharwirwa nezivo. 10Kana vakarurama vachipfuurira mberi zvakanaka, guta rinofara kwazvo; Kana vakaipa vachiparadzwa, kunopururudzwa. 11Nokuropafadzwa kwavakarurama guta rinokudzwa; Asi rinoputswa nemiromo yavakaipa. 12Anoninipisa wokwake anoshaiwa uchenjeri; Asi munhu ane njere anoramba anyerere. 13Anofamba ana makuhwa, anobudisa zvakavanda; Asi ano moyo wakatendeka, anofukidza mhaka. 14Kana vanhu vasingatungamirirwi nouchenjeri, vanoderera; Asi pavarairiri vazhinji ndipo panoruponeso. 15Wakazviita rubatso pamusoro pomutorwa, achaona nhamo nokuda kwazvo; Asi anovenga kuzviita rubatso, ndiye wakasimba. 16Mukadzi muuya anokudzwa; Vakasimba vanochengeta fuma dzavo. 17Munhu ane ngoni, anoitira mweya wake zvakanaka; Asi asina tsitsi anotambudza nyama yake. 18Wakaipa anopiwa mubayiro wokunyengedzera; Asi anokusha kururama achawana mubayiro wazvokwadi. 19Kururama kwazvokwadi kunoisa kuupenyu; Asi anotevera zvakaipa, anovinga rufu rwake. 20Vane moyo yakatsauka vanonyangadza Jehovha; Asi vanofamba nenzira yakarurama vanomufadza. 21Zvirokwazvo, wakaipa haangakoni kurohwa; Asi vana vavakarurama vacharwirwa. 22Sezvakaita chindori chendarama mumhino dzenguruve, Ndizvo zvakaita mukadzi wakanaka kumeso asina kungwara. 23Zvinodikanwa navakarurama zvakanaka bedzi; Asi vakaipa vanomirirwa nokutsamwa. 24Mumwe ariko anoparadzira, achiwedzerwa; Uye ariko anonyima zvaakafanira kupa, asi zvinongomushaisa. 25Chipavhurire achakodzwa; Uye anodiridza achadiridzwawo. 26Unonyima zviyo, vanhu vachamutuka; Asi mikomborero ichava pamusoro woanozvitengesa. 27Anoshingairira zvinhu zvakanaka, anotsvaka zvinofadza; Asi anotsvaka zvakashata, achasvikirwawo nazvo. 28Anovimba nefuma yake, achawa; Asi vakarurama vachanaka seshizha nyoro. 29Anotambudza imba yake, achagara nhaka yemhepo; Benzi richava muranda woanomoyo wakachenjera. 30Zvibereko zvowakarurama muti womupenyu; Unobata mweya yavanhu ndiye wakachenjera. 31Tarirai, wakarurama achapiwa mubayiro panyika; Ndoda wakaipa nomutadzi!